Waxbarashada Gaarka ah | BGA
BGA waxay si sharaf leh ugu diiwaangelineysaa Ardayda Naafada ah dhammaan baahiyaha ballaaran. Ardayda badankood waxaa loogu adeego meeleeyn ay ka mid yihiin dhiggooda guud ee waxbarashadda, ardayda qaar waxaa loogu adeego fasallo aad u yar oo si gooni gooni ah loogu kala saarayo oo ku saleysan Qorshahooda Waxbarashada Gaarka ah (IEPs), iyo ardayda dugsiga sare ee leh garasho aad u daran iyo / ama cuuryaanimo jidheed ayaa loo adeegaa waxbarashadeena Barnaamijka Madaxbanaanida (LFI). Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Adeegyadeena Waxbarashada Gaarka ah, fadlan la xiriir xafiiska BGA Main oo weydiiso inaad la hadasho xafiiska waxbarashada gaarka ah.
Barnaamijka Barashada Madax-bannaanida (LFI) wuxuu caawiyaa ardayda naafada ah ee ku nool bey'ad gaar ah oo daryeel, taageero iyo loogu talagalay inay ka caawiyaan ardayga inuu gaaro isku filnaansho. Ardayda barnaamijka ku jirta waxay leeyihiin culays xagga sare ee Autism-ka, cillada garashada ama naafonimada jidhka. Ardaydu waa sii joogi karaan barnaamijka LFI illaa ay ka gaarayaan dhalashadooda 22-aad waxaana loo adeegaa sida IEP ay qortay shaqaale gaar ah oo macallimiin iyo xirfad-yaqaanno ah. Faahfaahinta manhajka barnaamijka 'LFI' waa halkaan . Haddii aad xiisaynayso inaad waxbadan ka barato barnaamijka LFI, waan ku faraxsanahay inaan kuu diyaarinno booqashooyin ama aan kula soo xiriirno si aad u hesho macluumaad dheeraad ah. Fadlan la xiriir xafiiska BGA Main si aad u abaabusho fursadahaas.